स्वास्थ्य::Nepalese News Portal
होसियार ! यी १० अवस्थामा लसुन खाए हुनसक्छ खतरा !
लसुनले हाम्रो खानालाई मीठो बनाउने मात्रै होइन, यसमा पाइने धेरै किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ रहन धेरै मद्दत गर्दछ । लसुन नियमित खानाले स्वास्थ्यमा सुधार आउने र केही खतरनाक शारीरिक समस्या र रोगहरूबाट...
महिलाको कुन अंगमा छुदा यौन उत्तेजनामा हुन्छन् ? लिनुहोस् टिप्स ?
यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् र हुदै छन्। पनी , ती अध्ययनहरुबाट यौनका बारेमा नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ । लागी रहेको पनी छन् । केही महिना अगाडि गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई...
सरकारले उपचार नगरे मुद्धा हाल्न पाइने
सिराहा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकार अन्तरगत राखिएको बताउँदै अब गरीबले उपचार नपाएर मर्नु नपर्ने बताएका छन् । सरकारले गरीबको उपचार नगरे मुद्दा...
अनौठो बानी : नांगै भएर टीभी हेर्ने
कतिपय मानिसका अनौठा रुची हुन्छन् । अझ सेलिब्रेटीहरुका कतिपय शौख त तीनछक पार्ने खालकै हुन्छन् । हलिउड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टनको शौखका बारेमा सुन्दै अचम्म लाग्छ । ४९ वर्षकी एनिस्टनले आफ्नो त्यो अनौठो रुचिका बारेमा एक...
टाउको दुख्ने समस्या छ ? नाखानुस् यी खानेकुरा
एजेन्सी – टाउको दुखाइबाट धेरै मानिसहरु ग्रसित भएको पाईन्छ । अस्तव्यस्त जीवन शैली, अस्वथकर खानपिन जस्ता कुराले मानिसको टाउको दुखाई दिर्घकालिन समस्याको रुपमा देखा परेको पाईन्छ । आधा टाउको दुख्ने, बेलाबेलामा बेस्सरी टाउको दुख्ने, कन्चट...
भारतबाट भित्रिने ८६ प्रकारका औषधिमा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सरकारले भारतबाट आयत हुने ८६ प्रकारका औषधिमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । यसअघि ३० प्रकारका औषधि प्रतिबन्ध गर्न औषधि व्यवस्था विभागले सूची तयार गरेको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर ८६...
पहिलो बच्चा जन्मिएको कति समय पछि अर्को जन्माउनु उपयुक्त ?
आमा तथा शिशुको स्वास्थ्यमा आइपर्ने जोखिमबाट जोगिन आमाहरूले एउटा जन्म दिएको कम्तीमा एक वर्षपछि मात्रै अर्को गर्भधारण गर्नु उचित हुने एउटा नयाँ अनुसन्धानले जनाएको छ । ती अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्ने गरेको...
मिठाइ बनाउन कपडा रंग्याउने केमिकलको प्रयोग, केमिकल प्रयोग गर्ने पसलमा शिलबन्दी
काठमाडौँ । बानेश्वरमास्थित संगम स्वीटसले मिठार्इ बनाउनका लागि कपडामा रंग निकाल्न प्रयोग गरिने अखाध्य केमिकल प्रयोग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालाय र उपभोक्ताकर्मीसहितको अनुगमन टोलीले...
महिनाबारी पछि कुन दिनको सेक्स सबैभन्दा सुरक्षित ? जानी राखौं
महिनावारी हुनु अघि र भएपछिका केही निश्चित दिनमा यौन सम्पर्क गर्नाले गर्भ रहँदैन भन्ने पुरानो मान्यता छ । जसलाई अहिलेका आधुनिक अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले विज्ञहरुले परिवार नियोजनको एउटा विकल्प अर्थात...
विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा जनचेतना कार्यक्रम संचालन
रसुवा । इजिप्टमा रहेर मेडिकल शिक्षा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको संस्था एएनएमएसले रसुवाका दुई विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा जनचेतना कार्यक्रम संचालन गरेका छन् । जिल्लाको नव विजया मावि, भलायडाँडा र सेतिदेबी मावि, धुसेनीमा उक्त कार्यक्रम संचालन...